Iiholide eziqaqambileyo eMussoorie, isitishi seNduli saseIndiya
Iingcali zoKhenketho lwaseburhulumenteni zaseIndiya zibonelele ngesikhokelo sendawo eya eMossoorrie. Nantsi yonke into oyifunayo malunga neendawo ezi-5 eziphezulu eMussoorrie njengoKhenketho lwaseIndiya.
Esona sitishi sithandwayo eIndiya, Mussoorie, nangona singekho capitalise yasehlotyeni njengezinye izitishi zentaba, yayiyindawo yeholide zaseBritane ngexesha lekoloniyali hayi nje ngemozulu yayo epholileyo kodwa kunye nobuhle bayo obumangalisayo. engasayi kushiya umbono kuye nabani na ongqinayo. Ukuphumla ezinyaweni ze Uluhlu lweGarhwal Himalayan, isikhululo senduli sidume ngombala wayo oluhlaza okwesibhakabhaka, onamabala, neenduli ezigqunywe likhephu, iinduli eziqaqambileyo, ezinentaba, imbonakalo ekude yeGanga kunye neJamuna Rivers zombini, kunye nesithili saseDoon kunye nesixeko saseDehradun esijongelayo. Iholide encinci emnandi kwesi sikhululo sithandekayo, sihamba kwiindlela ezinqamlezileyo ezicacileyo, ezinelanga zenza iphupha leholide. Ukukunceda ukuba uthathe iholide, nantsi isikhokelo kwiholide eMussoorie kubaKhenkethi. Kuya kufuneka une I-Visa yaseIndiya yoKhenketho ukuza eIndiya.
ILal Tibba, ethetha 'iNduli ebomvu', imi malunga neekhilomitha ezi-6 ukusuka eMussoorie, eLandour, kwaye eyona ndawo iphakamileyo eMussoorie ukusuka apho uyakufumana umbono otshisayo kunye nowothusayo wesitishi sonke sendulini, ngakumbi xa ubonwa ngenye yeeteleskopu ezininzi ezifakwe apha. Yindawo yokuhlala ngoku ehlala nomkhosi wamaIndiya kodwa usenokundwendwela xa undwendwela i-Landour ekufuneka uyenzile ukuba uku-Mussoorie. Endleleni eya eLal Tibba uya kufumana ezinye izindlu zababhali abadumileyo abanjengoRuskin Bond, elalingaba lithuba elingavunyelwa ukuba lidlule apho. Uya kufuneka uyibone panoriki yokujonga umda weTibet ukusuka kuLal Tibba, kunye neeHimalaya ezinamandla ezikungqongileyo macala onke. Elona xesha lilungileyo lokundwendwela le ndawo liya kuba ngoMatshi ukuya kuJulayi apho bekungayi kubanda kakhulu kwaye endaweni yoko uyokonwabela isibhakabhaka sasehlotyeni kunye nomoya opholileyo.
Kufuneka ujonge u Isicelo seVisa saseIndiya ye-eVisa India (Indiya yaseVisa kwi-Intanethi) ethatha imizuzu emi-2-3 ukugqiba
Kubekwe kuyo phakathi kweMussoorie neDehradun, Kempty Falls, emi kwindawo ephakame ngeenyawo ezingama-40, yafumana igama layo kwibinzana elithi 'inkampu neti' edibene nayo ngenxa yamaqela amakhulu eti awayeqhele ukwenzeka apha ngexesha lolawulo lwaseBritane eIndiya xa yayiqhelekile indawo yepikiniki. Isathandwa phakathi kwabakhenkethi njenge Indawo yokufota apho umntu afumana ukonwabela ukubona ukuwa kwamanzi kuyehla kwaye kuqubha nakwelinye iitshaneli apho umjelo wamanzi wahluleke khona. Ungabona abakhenkethi bequbha kwaye bahlamba apha unyaka wonke kwaye bayonwabela umbono omnandi kunye nexesha kunye nabathandekayo babo. Endleleni yakho eya kwiKempty Falls, wena Ungamisa kwiLake Mist ejikelezwe ngamahlathi aluhlaza macala onke kunye nalapho unokuhamba ngesikhephe ngelixa uthatha ubuhle bendawo.
khangela Iimfuneko zepasipoti yaseIndiya ngaphambi kokuba ufake isicelo Indian Visa ekwi-Intanethi.
Ukuphela kwelifu kume kanye ukuphela kwedolophu yaseMussoorie kwaye inikezela ngeyona mibono mihle yom-oki kunye namahlathi deodar ayijikelezileyo kunye neAglar River Valley ejonge ngaphaya. Amagqabantshintshi ale ndawo ngokuqinisekileyo ngamafu amhlophe emhlophe ahlala kubonakala ngathi agutyungelwe luxolo nokuzola okukule ndawo, kude nesixeko esikhulu sedolophu esezindulini, kunikezela ukubuyela umva kwindalo. Ayisiyindawo efanelekile kuphela kubathandi bendalo, kodwa unokuhlala kwiihotele zayo ezininzi kunye neendwendwe. Ezi zakhiwo zilapha ziya kunika umdla kuye nabani na oshiyekileyo wolwakhiwo lwaseBritane ababonisa lona ngekratshi. I isakhiwo esidala eMussoorie, isakhiwo esi-rustic sesiNgesi yakhiwa ngo-1838Ihotele yelifa lemveli ngoku eyaziwa ngokuba yi-Cloud's End Forest Resort kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala eMusororie ukuba ufuna ukuhlala kude nesixeko kwaye ujikelezwe ziimbono ezintle kwaye abanye bakwamkela ukuthula.
Qinisekisa ukuba umgangatho wobuso bakho befoto ubusephezulu xa kufikwa kwisicelo sakho soMkhenkethi I-eVisa India (Indian Visa ekwi-Intanethi).
Le nduli, yona yesibini ephezulu kakhulu eMussoorie emva kweLal Tibba, inikezela ngeyona ndlela intle yedolophu endulini kodwa engaphezulu kuneyona ithandwa kakhulu kubakhenkethi ngembali yayo enomdla kakhulu. Okokuqala, kuthiwa yi-a Intaba-mlilo engasasebenziyo eMussoorieOkwenza ukuba ibe yindawo enomdla wokuyindwendwela, okwesibini ibalulekile eMossoorie kuba ibali lithi ngexesha lolawulo lwaseBritane xa abantu babesandula ukuqala elokishini, amaNgesi azisa inkanunu Bekuya kugxothwa yonke imihla ukwazisa abantu bedolophu malunga nexesha losuku apho banokuthi babeke khona iiwotshi zabo kwakhona. Nangona le nkanunu isuswe kudala, igama lincamathele kule ndawo. IGun Hill ikwanendlela yokuhamba ngeemoto zentambo kubakhenkethi ukufumana umbono omangalisayo wedolophu ukusuka kubude obulungileyo.
Indlela eMall eMussoorie yenye ye ezona ndawo zaziwayo eIndiya kwaye akukho namnye ungevanga ngayo. It ibekwe kanye entliziyweni yesixeko kwaye iyathandwa ngelifa layo lobukoloniyali, iimali ezisaseleyo ezinokubonwa kwiibhentshi ezininzi kunye neziphatho zezibane ezinokufumaneka kuyo yonke indawo endleleni, ezele zonke iindidi zevenkile, kunye neendawo zolonwabo njengeparlors yomdlalo wevidiyo. kunye nokukhwela kwi-skating rinks. Ivenkile yeencwadi iCambridge, yenye yezona Ivenkile yeencwadi eIndiyaikwakhona, kwaye umbhali uRuskin Bond uhlala eza kutyelela le venkile kwaye ngamanye amaxesha ufunda. IMall Road yindawo yokuqala efika engqondweni yomntu xa ucinga ngeMossoorie, yiyo loo nto ngokuqinisekileyo kufuneka uyibone ngelixa useholideyini eMossoorie eIndiya.
Isikhokelo seVisa seIndiya